လွ်ာကဲြ၊ လွ်ာနာ၊ လွ်ာ အဖု အပိန္႔ ထြက္တာကို ေပ်ာက္ကင္းေစမဲ့ ေဆးနည္း…! - ZeeKwat
Home » Gallery » Health » လွ်ာကဲြ၊ လွ်ာနာ၊ လွ်ာ အဖု အပိန္႔ ထြက္တာကို ေပ်ာက္ကင္းေစမဲ့ ေဆးနည္း…!
လွ်ာကဲြ၊ လွ်ာနာ၊ လွ်ာ အဖု အပိန္႔ ထြက္တာကို ေပ်ာက္ကင္းေစမဲ့ ေဆးနည္း…!
ဇောျဂြီ တောငျဝှေး ဆေးတောျပငျကို အခြို့ အလှစိုကျကွခွငျး၊ ဘုရားပနျးအိုး ထိုးခွငျး ပွုကွပါသညျ။ အမြိုးသမီးမြားအတှကျ ဇောျဂြီ တောငျဝှေးဆေး အသုံး တငျပွခဲ့ပွီး ဖွစျပါသညျ။
တစျခါတစျရံ လြှာပေါျတှငျ အဖုအပိနျ့ ထှကျခွငျး၊ လြှာကှဲ၊ လြှာနာဖွစျပါက ဇောျဂြီ တောငျဝှေးပငျ၏ အမွစျအား ကြောကျပဉြျတှငျ ဆား အနညျး ငယျလေးထညျ့ကာ သှေးပွီး ထိုဆေးရညျဖွငျ့ လြှာကိုနှိုကျပေးခွငျး၊ လြှာပေါျတငျခွငျး ပွုလုပျပေးလိုကျပါ။ ပြောကျကငျး သကျသာသှားပါမညျ။
ဇောျဂြီတောငျဝှေး ပဉ်စ (၅) ပါးအား ရတေစျဖလားဖွငျ့ တစျဝကျတငျအောငျ ပွုတျပါ။ ထိုဆေးရညျကို ထနျး လြှကျ (၁၀) သားဖွငျ့ ရောပွီး ပွုတျကြိုပါ။ ထို ဆေးရညျအား လကျဖကျရညျ ပနျးကနျ (၁) ခှကျနံနကျည သောကျပေးခွငျး ဖွငျ့ အူရောငျခွငျးကို လြော့ကြ သကျသာ ပြောကျကငျး စပေါသညျ။
ဝမျးပကြျ၊ ဝမျးဖော၊ ဝမျးကိုကျ
ဇောျဂြီ တောငျဝှေးရှကျ နုနုလေးမြားကို သုပျစားပေးပါ။ ဝမျးနှငျ့ ပတျသကျသော ရောဂါမြား အတှကျ အလှနျ ကောငျး ပါသညျ။ ထိုကွောငျ့ ဆေးကွိတျဇောျဂြီတို့ ကိုငျသော ဆေးတောငျဝှေးကဲ့သို့ ဆေးစှမျးကွီး၍ ဇောျဂြီ တောငျဝှေးဟု အမညျမှတျခဲ့သညျ ထငျမိတော့သညျ။
Ref : Mystyle